Industrylọ ọrụ na-ahụ maka ihe ndọta igwe nke China na-arụ ọrụ dị mkpa n'ụwa. Ọ bụghị naanị na ụlọ ọrụ ndị na-arụ ọrụ na ngwa, mana ọrụ nyocha anọwo na-arị elu. Na-adịgide adịgide ndọta ihe na-tumadi kewara obere ụwa ndọta, metal na-adịgide adịgide ndọta, mejupụtara magnet na-adịgide adịgide magnet. N'ime ha, magnet ụwa Neodymium na-adịghị ahụkebe bụ ngwaahịa igwe magnet na-arụ ọrụ nke ọma.
1. China na-ewe uru nke obere ụwa Neodymium na-adịgide adịgide ndọta ihe.
China bụ onye na-emepụta ihe ndị na-emepụta obere ala, na-aza 62,9% nke ngụkọta ngwaahịa ịnweta ala na 2019, United States na Australia na-esote 12.4% na 10% n'otu n'otu. N'ihi ụkọ ala dị iche iche, China abụrụla isi ntọala ụwa kachasị ukwuu na mbupụ nke nnukwu ማግ ụwa. Dị ka ọnụ ọgụgụ nke China Rare Earth Industry Association si kwuo, na 2018, China mepụtara tọn 138000 nke ihe ndị dị na Neodymium, na-aza 87% nke ngụkọta zuru ụwa ọnụ, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ okpukpu 10 nke Japan, nke abụọ kachasị elu n'ụwa.
2. Obere ụwa Neodymium magnets na-ejikarị ya n'ụwa.
Site na mpaghara nke ngwa ngwa, magnetik Neodymium dị ala na-ejikarị eme ihe na magnet adsorption, nkewa magnetik, igwe eletrik, eriri akpa, eriri ọnụ ụzọ, ihe egwuregwu na mpaghara ndị ọzọ, ebe a na-ejikarị magnet na-arụ ọrụ dị elu na ụdị eletrik dị iche iche. motọ, gụnyere moto nchekwa ọkụ, moto ụgbọ ala, ọgbọ ike ikuku, ngwa ọdịyo na ihu igwe, igwe mbugo, wdg.
3. Ngwongwo ihe omuma nke Neodymium nke China na-ebili nwayọ.
Kemgbe afọ 2000, China abụrụla onye kachasị nwee ihe nrụpụta ala ụwa na-adịghị ahụkebe Neodymium magnets. Site na mmepe nke ngwa ngwa ala, mmepụta nke ihe magnet NdFeB na China na-eto n'ike n'ike. Dabere na data nke China Rare Earth Industry Association na 2019, mmepụta nke Neodymium blanket e mepụtara bụ tọn 170000, na-eche maka 94.3% nke ngụkọta nke ihe magnetik nke Neodymium n'afọ ahụ, NdFeB jikọtara ọnụ ruru 4.4%, yana mmepụta ndị ọzọ niile weere naanị 1.3%.
4. Nchọpụta magnet nke China ga-aga n'ihu na-ebili.
A na-ekesa ihe oriri zuru ụwa ọnụ nke NdFeB na ụlọ ọrụ ụgbọ ala, bọs na ụgbọ okporo ígwè, robot nwere ọgụgụ isi, ike ikuku ikuku na ụgbọ ala ike ọhụrụ. Onu ogugu nke ulo oru ndi a di n’elu n’aho ise na-abia n’iile ga-agafe ihe kariri 10%, nke n’eduga na abawanye nke mmeputa Neodymium na China. A na-eme atụmatụ na mmepụta nke magnet Neummium na China ga-enwe ogo uto nke 6% n'ime afọ ise na-esote, ma gafere 260000 tọn site na 2025.
5. andchọ maka ịrụ ọrụ dị elu nke ihe ụwa na-adịghị ahụkebe na-atụ anya ka ọ too.
A na-ejikarị arụ ọrụ ụwa dị elu eme ihe na mpaghara akụ na ụba carbon, dị ka nchekwa nchekwa na nchekwa ụlọ ọrụ gburugburu ebe obibi. Dika mba di iche-iche n ’uwa nile na etinye ego n’ obodo carbon, ike, nchekwa na nchekwaba gburugburu ma na akwalite ahihia ahihia, obodo n’iile tinye aka n’ulo oru di ala, nchekwa nchekwa na nchekwaba gburugburu ebe obibi ma na akwalite ahihia ahihia. ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ dịka ụgbọ ala ike ọhụrụ, igwe na-arụ ọrụ ike ikuku na ịmịpụta ihe mara mma, a na-atụ anya ka nnukwu ọrụ dị elu na-adịgide adịgide ga-eto. Site na mmepe ngwa ngwa nke ụlọ ọrụ ndị na-apụta, a na-atụ anya ka ndị na-achọ ihe magnetik dị ala na-eto eto.